Anevia သည်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံး Cloud-Native CDN Solution ကိုစတင်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Anevia မိတ်ဆက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးတိမ်တိုက်-ဇာတိ CDN ဖြေရှင်းချက်
Anevia မိတ်ဆက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးတိမ်တိုက်-ဇာတိ CDN ဖြေရှင်းချက်
AneviaOTT ၏, တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူနှင့် IPTV ဆော့ဖျဝဲဖြေရှင်းချက်ကကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးသောမိုဃ်းတိမ်-ဇာတိအကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ရက် (CDN) ပင်အထွတ်အထိပ်အသွားအလာကာလအတွင်းအရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုသုံးနေစဉ်အလွယ်တကူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် CDN လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မှအော်ပရေတာကို enable တံ့သောဖြေရှင်းချက်စတင်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။
Anevia ရဲ့မျိုးဆက်သစ် CDN ထုတ်ကုန်, NEA-CDN 5.0 များအတွက်အသစ်ဗိသုကာယခုအော်ပရေတာရဝုဏ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကမိုဃ်းတိမ်ပေါ်မှာအဖြစ်အစွန်း-based အရင်းအမြစ်များကိုသို့မဟုတ် data ကိုအပေါ်တစ်ဦး CDN ​​run ဖို့ခွင့်ပြုမိုဃ်းတိမ်ကို-ဇာတိနည်းပညာများအပေါ်အခြေခံသည် ဟိုက်ဘရစ်အခြေခံအဆောက်အဦနှင့်အတူလုံးဝသဟဇာတဖြစ်စင်တာ-based အရင်းအမြစ်များကို။
အော်ပရေတာယေဘုယျအားဖြင့်သာမိမိတို့၏ရရှိနိုင် CDN စွမ်းရည်၏ 6% ကို အသုံးပြု. နှင့်တကွ, စွမ်းရည်၏ 94% ကသာအမြင့်ဆုံးယာဉ်အသွားအလာကြိမ်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုသည်အဖြစ်ဖြုန်းတီးတတ်၏။ နေဆဲအထွတ်အထိပ်အသွားအလာလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံနေစဉ် Kubernetes အခြေခံအဆောက်အအုံပေါ်တွင်အခြေခံပထမဦးဆုံး CDN ​​သကဲ့သို့, NEA-CDN 5.0 အကွာအဝေးအော်ပရေတာဝယ်လိုအားအပြောင်းအလဲများအဖြစ်ချက်ချင်းထသို့မဟုတ်ဆင်းသူတို့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံစကေးမှခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်, ဤစွန့်ပစ်ဖြတ်ဖို့အော်ပရေတာနိုင်ပါတယ်။ အော်ပရေတာ ပို. ပို. မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် CDNs လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့လိုသောအခါတစ်ကြိမ်, ဒီလည်း သာ. ကြီးမြတ်သူတို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်အဖြစ်ပေးအပ်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ကြည့်ရှုအကောငျးဆုံးအတှေ့အကွုံအရသေချာစေရန်, Anevia ရဲ့အသစ်ဖြေရှင်းချက်ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, အချိန်-ပြောင်းကုန်ပြီ, VOD, 4K နှင့်က Ultra-အနိမျ့ latency အဖြစ်သူတို့လိုအပ်သမျှကိုနောက်မျိုးဆက်ဝန်ဆောင်မှုများ, လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မှအော်ပရေတာနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ထားတဲ့ Analytic ပလက်ဖောင်းလုပ်ကိုင်ရန် NEA-CDN 5.0 လွယ်ကူသောပါစေ။
ဒါဝိဒ်သည် Tencer, ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်, NEA-CDN, Anevia commented: "ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအထိစကေးနှင့်အသွားအလာတောင်းဆိုချက်များကိုသာအတက်အကျအဖြစ်ချသူတို့ကိုဖွတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ခိုင်မာသောလိုအပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကဒီလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဖြေရှင်းချက်ကိုဖန်တီးရန်ထိုကဲ့သို့သော Kubernetes အဖြစ်သွေးထွက်-အစွန်းအနာဂတ်-အထောက်အထားနည်းပညာများ, ပေါင်းစည်းပြီ။ "
Anevia ဦးဆောင် OTT ဖြစ်ပါတယ် IPTV ဝယ်လိုအားန်ဆောင်မှုအပေါ်ကဗီဒီယို, အချိန်-ပြောင်းလဲတီဗီနှင့်ဗီဒီယို streaming တိုက်ရိုက်တီဗီများ၏ပို့ဆောင်မှုများအတွက်ဆန်းသစ် multiscreen ဖြေရှင်းချက်၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုပံ့ပိုးပေးသူ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဗွီဒီယိုချုံ့တဲ့ပြည့်စုံအစုစုကို, multiscreen ကမ်းလှမ်း IPTV ဦးခေါင်း-ကြီးစွန်းတစ်မျိုးဆက်သစ်တီဗီအတွေ့အကြုံကိုခံစားရန်ကြည့်ရှု enable လုပ်ဖို့တိမ်တိုက် DVR နှင့် CDN ဖြေရှင်းချက် - အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးနှင့်မည်သည့် screen ပေါ်မှာ - 4K UHD အကြောင်းအရာအပါအဝငျ။ အဆိုပါဖြေရှင်းချက်ကိုကျယ်ပြန့်တကမ္ဘာလုံး-ကျော်ကြားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကမွေးစားခြင်းနှင့်အော်ပရေတာ, တီဗီထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဧညျ့, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကော်ပိုရိတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဗီဒီယိုကဝန်ဆောင်မှုပေး-TV ကိုပေးဆောင်ပြီ။
2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Anevia အဆင့်မြင့်သည်ဗီဒီယိုနည်းပညာများနှင့်အတူစျေးကွက်မှပထမဦးဆုံးဖြစ်ခြင်း၏တစ်ဦးတွင် track record ရှိပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအများအပြားတီဗီ, မီဒီယာနှင့်ဧညျ့စက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့များမှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်တက်ကြွစွာပံ့ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်ရုံးချုပ်ကို USA, ဒူဘိုင်းနှင့်စင်္ကာပူမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာရုံးခွဲများနှင့်အတူ Anevia ပဲရစ် Euronext ကြီးထွားစျေးကွက်အပေါ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
Lauren Philippe, အငယ်တန်းအကောင့်အလုပ်အမှုဆောင်
Silvia Candido, ဖျော်ဖြေမှုစျေးကွက်ဒါရိုက်တာ
Tel: + 33 1 81 94 50 95
Anevia CDN မိုဃ်းတိမ်ကို အထောက်အပံ့ IPTV OTT SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် virtual reality 2019-03-29
ယခင်: ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် / ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး
နောက်တစ်ခု: Plazamedia မှ Intinor ရဲ့မျိုးစုံ Direkt Router ရောင်းချ